Tag: kudhonza uye kudonhedza | Martech Zone
Tag: dhonza uye udonhedze
China, January 21, 2016 Chitatu, Ndira 20, 2016 Douglas Karr
Indasitiri yeemail ine matambudziko makuru maviri nekuenderera mberi kwayo kwekushandisa kwakawanda kutumira tsamba: Kuzvifananidza - Kutumira iwo iwo meseji, panguva imwe chete, kune vese vanyoreri vako veemail havasi kuwana iwo chaiwo meseji kune yakakodzera nguva kune iye chaiye mugashiri. Sei Marianne, ane makore makumi maviri nemana ekuberekwa, achigashira iwo iwo zvipo zvakafanana naMichael, ane makore makumi mashanu nemanomwe, ivo vachifarira zvinhu zvakasiyana? Sezvo mugashiri wega wega akasarudzika, saizvozvowo meseji. Munhu zvichienderana
Zvishoma zvinhu zvinogona kunetsa kupfuura kuronga kunze email HTML template kana kushanda neyechitatu-bato template muvaki. Fungidzira uchikwanisa kumisikidza, kugadzira, kugadzirisa patsva, uye kugadzirisa ako matemplate eemail… pasina HTML kukodha kana hunyanzvi hwekugadzira webhu. Izvi ndizvo chaizvo zvakagadzirwa ne dotMailer neyavo EasyEditor. Zvimiro zve dotMailer's EasyEditor: Kurumidza kuendesa mifananidzo yako uye gadzira raibhurari - Gara wakarongeka nemifananidzo yese yemushandirapamwe munzvimbo imwechete. Kwayedza mushandirapamwe mameseji